Labbo ruux oo mindi lugu dilay magaaladda Marseille ee dalka Faransiiska | Somaliska
Labbo ruux oo mindi lugu dilay magaaladda Marseille ee dalka Faransiiska
Ugu yaraan labbo ruux ayaa la runsan yahay ineey geeriyoodeen ka dib markii nin mindi ku hubeeysan ku weeraray magaaladda Marseille ee dalka Faransiiska. Ninka falka geeystay ayaa ciidanka booliska waxaa ooda kaga qaadeen xabado.
Afhayeenka booliska Olivier de Mazieres oo saxaafadda la hadlayey ayaa sheegay in labbo haween ah ay ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkaasi. in ay weerarkaasi ku dhinteen. Boolisku waxaa ay ka digeen in dadku saantooda iyo dhaq dhaqaaqooda ku badan bartamaha magaaladda. Falkan ayaa sidoo kale waxaa ay boolisku sheegeen ineey eeggayaan in yahay mid argagaxiso.
Ninkan weerarka geeystay ayaa ku qeeylinayey Allaahu Akbar, markii uu weerarka fulinayey. Ciidammadda ammaanka ayaa isku dayaya ineey xaalad deg deg ah ku soo rogaan dalkaasi. Faransiiska ayaa tan iyo sanadkii 2015-kii waxaa ka dhacay weeraro aragagaxiso oo ay intooda badan sheegeen kooxda Daacish.